Foundation Course for Computer Vision – Skylight Technological Online Store
Skylight Technological Online Store
$15,000.00 1 item
Home / Uncategorized / Foundation Course for Computer Vision
View cart “Foundation Course for Computer Vision” has been added to your cart.
Foundation Course for Computer Vision
Foundation Course for Computer Vision quantity
ကျွန်တော်တို့ရဲ့. Foundation Course For Computer Vision စာအုပ် ကို အုပ်ရေ ၃၃၀ မှာ ၂၁ အုပ်သာကျန်ပါတော့တယ်။ စာအုပ်ထွက်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်း အုပ်ရေ ၃၀၀ ကျော် ရောင်းချထားပြီးတာကြောင့် Academic နယ်ပယ်မှ Computer Vision ကိုလေ့လာနေကြတဲ့ သူမ်ား စာတမ်း များး စာစောင်များ ရေးသားနေကြတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကြားမှာ အထူးရေပန်းစား ဝယ်ယူနေကြတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Computer Vision ဆိုတာ AI နည်းပညာရပ်ထဲမှ နည်းပညာခွဲတစ်ခု ။
လူသားမျက်လုံးမှတဆင့် အရာဝတ္ထု ၊ လူပုဂ္ဂိုလ် အစရှိသော Object များကို လူသားများ
မြင်တွေ့ သိရှိခံစားမိ သလို ကွန်ပျူ တာကိုလည်း သိရှိခံစားနားလည်အောင် လေ့ကျင့်မှုတွေ၊ သင်ကြားမှုတွေ၊ တီထွင်စမ်းသစ်မှုတွေ ပြုလုပ်ရတဲ့ နည်းပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Computer Vision နည်းပညာကိုဘယ်မှာသုံးလည်း?
ဥပမာအနေဖြင့်ပြောပြရမယ်ဆိုရင် အခုလက်ရှိဖုန်းတွေ၊ ကင်မရာတွေမှာ မျက်နှာကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ လေးထာင့်လေးနဲ့ပြသပေးနေခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖုန်းတွေ ကင်မရာတွေမှာAIနည်းပညယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Computer Vision နည်းပညာကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားလို့ဖြစ်ပါတယ်
ဒိအပြင် Facebook မှာလည်းသူငယ်ချင်းတွေ ပါတဲ့ ့ပုံတင်လိုက်တာနဲ့ FB ကမေးတယ် မင်းသူငယ်ချင်းဘယ်သူ့ကို Tag မှာလားဆိုပြီး ။ ဒီအပိုင်းမှာလည်း Facebook ဟာ Computer Vision နည်းပညာကို အသုံး ပြုထားလို့ ပုံထဲက ဘယ်သူဘယ်ဝါ တွေက မိမိရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါဆိုတာချက်ချင်းတန်း နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
Computer Vision နည်းပညာကို Security ၊ IoT ၊ Robot ၊ Automatic Control Systemစတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာ ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ပြီး တီထွင်စမ်းသစ်မှုတွေမြောက်မြားစွာကို ပြုလုပ်ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Computer Vision နည်းပညာဟာ နောင် ၁၀ နှစ်ထိ ရေပန်းစားနေအုန်းမည့် နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ယခုလို အဆင့်မြင့် AI နည်းပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Computer Vision.နည်းပညယရပ်ကို အခြေခံကနေစပြီးလက်တွေ့ကျကျ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံ Linux ဘာသာရပ်၊ Python Programming ဘာသာရပ်နှင့် သီအိုရီမွစ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရမည့် Project ၈ ခုအတွက် Code.တစ်ကြောင်းချငိးဆီကအစရှင်းလင်းရေးသားပေးထားသည့် Open CV ဘာသာရပ္မ်ားကို မြန်မာလို ကာလာဓာတ်ပုံများ၊ Flowchart များ၊ Diagram များ ၊ Table များနှင့်ပြည့်စုံစွာရေးသားထားတဲ့စာအုပ်လေးကို မှာယူချင်ဆိုရင်တော့ ပုံမှာပါတဲ့ QR Code Order Form (သို့) https://bit.ly/39vH1a8 လေးကတဆင့်မှာယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Be the first to review “Foundation Course for Computer Vision” Cancel reply
Auto Doctor Engineering Company Ltd.
Baho Road, No. 202,/5th Floor,
Postal Code: 11041
© Skylight Technological Online Store 2021
You're viewing: Foundation Course for Computer Vision $15,000.00